प्रधानमन्त्रीको शरीरमा जडिएको जवान मिर्गौलाको कथा
किशोर नेपाल आइतबार, फागुन २५, २०७६, १८:३३
समाचार अनुसार, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा दिन दुई गुणा र रात चौगुना प्रगति भइरहेको छ। समीक्षा संग्रौलाको तन्नेरी शरीरबाट निकालिएको मिर्गौला प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा ‘फिट’ भयो।
सरकारी समाचारहरूले समीक्षाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दान दिएको भ्रम छरे पनि तथ्य त्यसको ठीक विपरीत छ। समीक्षाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना आधा–अधुरा सपना पूरा गर्न सकुन् भनेर मिर्गौला दिएकी पक्कै होइनन्। उनका पनि केही अभिलाषा पक्कै होलान्। प्रधानमन्त्री ओलीले समीक्षाको भविष्य सुरक्षित राख्न निकै ठूलो योगदान दिएको चर्चा पनि अहिले राजनीतिक बिरादरीमा चलेको छ।
सम्भवतः अब समीक्षाले झापा फर्किरहनुपर्ने छैन। उनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा नै बसोबासको प्रबन्ध भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई समीक्षाले लगाएको गुन र्बिर्सिनसक्नु छ। उनको जवान मिर्गौलाले ओलीको उनन्सत्तरी वर्षको बूढो शरीर धानेको छ। कुन्नि किन हो, विदेशतिरका चिकित्सकहरू बुढो शरीरमा तन्नेरी अंगहरूको प्रत्यारोपणलाई अप्ठेरो प्रक्रिया मान्दा रहेछन्। धन्न, नेपालका चिकित्सकहरूले त्यस्तो अप्ठेरो 'फिल' गरेनछन्।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना भएकै दिन मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण र शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे। तर, चीनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको स्वास्थ्यलाभको शुभकामना सन्देश भने अलि ढिलै गरेर शुक्रबार मात्रै आयो।
कोरोना भाइरसका कारण पीडित चीनियाँ जनताको सुरक्षामा सीको ध्यान बढी आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो। यी शुभकामना सन्देशले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई देशका मजबुत नेताका रूपमा स्थापित गराउन मद्दत गरेको बताउँछन ओली निकट पत्रकार। यस्ता सन्देश अरु देशबाट पनि आएका हुन्। तर, भौगोलिक सामीप्यताका हिसाबले छिमेकका नेताहरूका नाममा आएको शुभकामनालाई मात्रै यहाँ उल्लेख गरिएको हो।
सरकारी सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य दिनदिनै सुध्रिँदै गएको लेखेका छन्। प्रधानमन्त्रीको आत्मबलको तारिफ गरेका छन्। यही क्रममा ‍सेतोपाटी अनलाइनले अत्यन्त उत्साहपूर्वक प्रधानमन्त्री ओलीले दस लिटर मुत्नु भएको समाचार लेख्यो। प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको बनावटी स्वास्थ्य विवरण दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको क्रियटिनिन लेभल कति छ? रक्तचाप कति छ? ज्वरो छ कि छैन? जवान मिर्गौलाले कत्तिको साथ दिएको छ? चिकित्सकहरूले चाहिने कुरा केही बताएका छैनन्। न त अरु कुनै विश्वसनीय तथ्यांक र उपचार क्रमका तथ्यहरू नै बाहिर ल्याएका छन्।
अघि-अघि श्री ५ सरकारका पालामा पनि यस्तै हुन्थ्यो। मानिस खुस्केर शव पल्टिउन्जेलसम्म स्वास्थ्य स्थिति स्वाभाविक रहेको बताइन्थ्यो। अहिलेका चिकित्सकहरूले पक्कै पनि त्यसो नगर्लान्। यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार राजसी छाँटका साथ भएको छ भन्न डराउनु पर्दैन।
अस्पतालका कुनाकुनामा एम्बुलेन्स, कतिबेला उपचार कक्षमा बोलाइने हो भनेर खुट्टो उचालेर बसेका चिकित्सकहरू र ती चिकित्सकलाई हेरेर आफूलाई ‘बिसेक’ भएको ठान्न विवश बिरामीहरू। डायलाइसिस गर्ने पालो कुरेर बसेका बिरामीलाई देख्दा यस्तो लाग्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शरीरमा समीक्षाको मिर्गौलाको प्रत्यारोपण भारत, सिंगापुर, अमेरिका जहाँ गरेको भए पनि हुन्थ्यो । उनलाई कसैको रोकतोक थिएन।
समीक्षाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना आधा–अधुरा सपना पूरा गर्न सकुन् भनेर मिर्गौला दिएकी पक्कै होइनन्। उनका पनि केही अभिलाषा पक्कै होलान्। प्रधानमन्त्री ओलीले समीक्षाको भविष्य सुरक्षित राख्न निकै ठूलो योगदान दिएको चर्चा पनि अहिले राजनीतिक बिरादरीमा चलेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको टिचिङ अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर प्रत्येक दिन दस जनाभन्दा बढी बिरामीको डायलाइसिस रोकिएको छ। अस्पतालका चिकित्सकहरूको कार्यतालिका बिग्रिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिलेको अवस्थामा नपुग्दो केही थिएन, समीक्षालाई लिएर खुरुक्क विदेशमा गएर मिर्गौला फेरेर आएको भएपनि सबैले जयजयकार गरी नै हाल्ने थिए।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको शारीरिक स्वास्थ्यको ग्राफ जतिसुकै माथि उठेपनि उनको राजनीतिको ग्राफ भने ओरालो लाग्न थालेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आउने–जाने राजनीतिक कार्यकर्ताहरू उनको राजनीतिक व्यवहारले रुष्ट छन्। प्रदेशको राजनीति गर्ने नेकपाका नेताहरू आफैले संविधान बनाएर पनि संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउन नचाहेकोमा रुष्ट छन्। ऐन–कानुनको तर्जुमा नहुँदा प्रदेश र स्थानीय निकाय सुचारु भएका छैनन्। पार्टीका दुई अध्यक्षबीच सँधै भइरहने मानसिक तहको मूठभेडले पनि नेकपाको राजनीतिलाई असंगत मोडमा पुर्‍याएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पुनर्नियुक्ति पार्टीभित्रका धेरै नेतालाई मन परेको छैन। हालका अर्थमन्त्री खतिवडामाथि पार्टीको भविष्यप्रति संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाइएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले आफूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको हनुमानकै तहमा स्वीकार गरेको वक्तव्यसमेत पढ्न पाइएको छ।
नेकपाका पराजित तर प्रभावशाली मानिने नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान सिफारिस नगर्ने अडानले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्र अल्पमतमा पारेको देखिन्छ। उनले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग आफूलाई संकटमुक्त बनाउन सहयोगको याचना गरेका छन्। माधव नेपालको नलिनु हुर्मत लिइसकेपछि अहिले उनीसँग हात मिलाउन खोज्नु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रत्युत्पादक सावित भएको छ।
यसबाहेक, ओलीको दुइ वर्षे राजमा दर्जनौं काण्ड भएका छन्। बालुवाटार जग्गा, मेलम्ची, बूढी गण्डकी, तामाकोशी, तारागाउँ–हयात, नेपाल ट्रष्ट , वाइडबडी, पुल, सडकलगायतका तमाम काण्डहरूको नालीबेली लगाएर साध्य छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीकै शासनकालमा संविधानले स्वीकार गरेको देशको धर्म निरपेक्ष स्वरुपको विनास हुने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको परिकल्पनाअनुसारको राज्य पद्धति चलाउन नसकेर एउटा मिथ्या संघीय राज्य चलाएका छन भन्नु अतिशयोक्ति हुने छैन।
आफूसँगै पार्टीका अध्यक्ष भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासमा लिन सकेका छैनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण एमाले र माओवादीको मिलनबाट सम्भव भएको थियो भन्ने हेक्का राख्न प्रधानमन्त्री ओली चुकेका छन्। उनलाई कतैबाट संक्रमणकालीन न्यायका हिसाबले प्रचण्ड समातिने वातावरण बनोस् भन्ने लागेको छ। नेता महरालाई जस्तै प्रचण्डलाई पनि कुनै प्रपञ्चमा फसाइने हो कि भन्ने आशंका सम्बध्द क्षेत्रमा व्याप्त छ। प्रधानमन्त्री ओलीका लागि माओवादीसँगको एकता अहिले आएर निल्नु न ओकल्नुको भएको देखिन्छ।
'बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न' भन्ने नेताले गणतान्त्रिक नेपालको राज-पाठ चलाउन पाउनु सानो कुरा होइन। नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्ति यथावत् रहने हो भने नेकपा एकपटक फेरि विभाजनमा जान सक्दछ। यो ठूलो कुरो होइन। पार्टीहरूको निर्माण र विघटन सँधै भइरहने कुरा होइन। तर, अहिले नेकपामा जुन खालको उथलपुथल देखिएको छ त्यसलाई सामान्य मान्न सकिदैन।
प्रतिपक्ष कमजोर रहेको अहिलेको अवस्थामा पनि नेकपाले सहज ढंगले सरकार चलाउन सकेको छैन। नेकपा अहिले आफ्नै कारण असहज परिस्थितिमा छ। प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा स्टेरोयडको डोज त छँदैछ। त्यसमा स्वाभिमानको डोज अलि बढी नै थपिएपछि विकार उत्पन्न हुनु सामान्य हो। तर त्यो विकारले देशलाई संकटमा पार्ने संकेत देखिनु सुखद् पाटो पक्कै होइन।